Dhawaaqyada Lagu Diiday Go'aanka Trump Ee Qudus Iyo Kacdoonada Durba Ka Bilaabmay Mandaqada | Araweelo News Network | Araweelo News Network
Dhawaaqyada Lagu Diiday Go’aanka Trump Ee Qudus Iyo Kacdoonada Durba Ka Bilaabmay Mandaqada
Israeli man blowing a Shofar near the Dome of the Rock (C) in the Al-Aqsa mosque compound in the Old City of Jerusalem al-Quds on December 5, 2017. (AFP photo)
Qaza(ANN)-Kumanaan Shacabka Falastiiniyiinta ee ku nool deegaanada la haysto ee Daanta Galbeed iyo Qaza ayaa billaabay isu soo baxyo ay ku diidan yihiin in Qudus ay noqoto caasimadda Israa’iil. Kadib markii Madaxweyne Trump ku dhawaaqay in Quds ay noqoto caasinada Israa’iil.
Go’aanka Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa’iil, waxay markaa kadib
dawladda Israa’iil geystay daanta Galbeed boqollaal ciidamo Yuhuud ah, ayadoo laga cabsi qabo in xiisadda ay ka sii darto.
Warar horudhac ah, ayaa sheegaya in siddeed qof oo Falastiiniyiin ah in ay ku dhaawacmeen rabshadaha la kowsaday go’aankaa oo ah mid dunida Islaamku si weyn uga cadhoodoon, Isla markaana dawladdaha reer galbeedka qaarkood si weyn u canbaareeyeen.
Go’aanka Madaxweyne Trump, ayaa noqonaya mid isbedel wayn ku ah siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka ee tobannaanka sano soo jirtay, waxaana laga bixiyay jawaabo cadho leh oo caalamka oo dhan ka imanaya, iyadoo dalal badan oo saaxiib dhow la ah Mareykanka ay diideen tallaabadaa.
Golaha amniga ee Qaramada Midoobey iyo ururka jaamacadda Carabta, ayaa maalmaha soo socda kulmaya si ay jawaabtooda uga bixiyaan go’aanka Trump ee arrinta Quds.
Ururka Xamaas ayaa ku dhawaaqay kacdoon cusub oo lagu diidanyahay go’aankaa oo si weyn loo rumaysan yahay inuu nabadgelyada mandaqada Iyo dunidaba ku yeesho.
Sacuudiga, ayaa cambaareeyay go’aanka Mareykanka ugu aqoonsaday Quds inay tahay caasimadda Israa’iil, iyadoo ay sii kordheyso cambaareynta caalamiga ah ee go’aankaasi.
Falastiiniyiinta ku nool koofurta marinka Qasa oo hadalkaas aad uga caraysan ayaa gubay sawirka Mr Trump Iyo ka ra’iisal wasaaraha Israa’iil iyo calanka Yuhuudda.
Israa’iil: Ra’iisal wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu,ayaa ku tilmaamay go’aan taariikhi ah oo caadil ah.
Faransiiska: Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa yidhi ”Ma taageersanin go’aankan oo aan waafaqsanayn shuruucda caalamiga ah waana mid mudan in laga shaleeyo ”.
Turkiga: Wasiirka arrimaha Turkiga ayaa ku tilmaamay tallaabo qayral-mas’uulnimo ah.
Paksitan: Dowldda Pakistan ayaa tidhi, ”waxaa mudan in uu Ka shaleeyo in Trump uu iska dhaga tiray baaqyadii caalamka oo dhan kaga imanayay”.
Shiinaha iyo Ruushka, ayaa wallaac ka muujiyay arrintan waxayna ka digeen xiisadda oo cirka isku sii shareerto.
Ra’iisal wasaaraha UK Theresa May ayaa sheegtay inay Trump arrintan kala hadli doonto.